नवजात शिशु कसरी हुर्काउने ? २०७४ असार १५ बिहीबार हाम्रो बारेमा
बाह्रखरी २०७३ पौष २७ बुधबार ०३:२८:०० नवजात शिशुलाई ६ महिनासम्म आमाको मात्र दूध खुवाउनुपर्छ । ल्याक्टोजन, गाईको दूध, भैँसीको दूध, सेर्लेक्स पनि खुवाउनु हुँदैन । बच्चा जन्मिएको आधा घन्टाभित्र निस्किएको पहेँलो दूध बच्चालाई खुवाउँदा अति नै पौष्टिक हुन्छ ।
यो नवजात शिशुलाई सबैभन्दा राम्रो रोग प्रतिरोधात्मक औषधि हो । जुन बच्चाले प्रशस्त मात्रामा स्तनपान गरेको छ, सो बच्चा तीक्ष्ण हुन्छ । दूधमा बच्चालाई चाहिने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेड, फ्याट, मिनरल्स पाइन्छ । जाडोमा कसरी जोगाउने ?
दक्षिण फर्केको कोठा अथवा घाम आउने कोठामा बस्दा राम्रो हुन्छ । घाम छिर्ने कोठामा बस्दा झ्याल बन्द गरेपनि न्यानो नै रहन्छ । हिटर बाल्दा हावा आउने ठाउँमा, अक्सिजन आउने ठाउँमा बाल्नुपर्छ । बच्चालाई ३ / ४ दिनमा नुहाइदिनुपर्छ । यदि नुहाउन नसके दिनदिनै सफा राखिरहनुपर्छ । नरम टालो (कपडा) मा मन तातो पानी लगाएर पुछ्न सकिन्छ ।
एउटा बच्चाको आमाले तेल तताएर बच्चाको आखामा हाल्दा आँखा फुलो परेको ‘केस’ पनि आएको थियो । त्यसैले विचार गरेर मात्रै तेल लगाउनुपर्छ । जाडोमा बच्चा बेहोस हुने पनि हुन्छ, त्यसैले जाडोबाट बच्चालाई जोगाउनुपर्छ । जाडो भएर ज्वरो आउँछ, त्यसपछि बच्चालाई इन्फेक्सन हुन्छ । आमाले पनि खानामा सन्तुलन गर्नुपर्छ । बच्चाहरु खोक्छन् । यो पनि चिसो र इन्फेक्सनको कारण हो । पानी तथा खानाको सन्तुलन मिलेन भने झाडापखाला पनि लाग्छ । आमाको दूधमात्र खाने बेला भने पखालाको सम्भावना कम हुन्छ । (परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा कार्यरत डा. कर्माचार्यसँग बाह्रखरीका लागि यसिमा महतले गरेको कुराकानीमा आधारित) तपाईंको मत